Anyị Super Bowl nke 2012, Versiondị 2! | Martech Zone
Ọganihu na-aga n'ihu! Mụ na Pat Coyle na nnukwu talent (Tim na Curtis) na-arụ ọrụ Innovative on ime website raara nye ikele maka 2012 Super nnukwu efere ebe a na Indianapolis.
Ndi Super Bowl Committee na-eduzi Mark Miles, Onye isi oche nke Central Indiana Mmekọrịta Partnership. Mark na-arụ ọrụ pụrụ iche ugbua, na-anabata teknụzụ weebụ ngwa ngwa iji kọọrọ ma kpọọ nkwado nke obodo. 'Versiondị' nke weebụsaịtị a gosipụtara ebumnuche - anyị nwere atụmatụ ndị a ugbu a:
A na-egosipụta vidiyo na ihe ọkpụkpọ ma na-agbanwe maka ojiji na Youtube nke mere na anyị nwere ike ịga malitere ịrịa! Jide n'aka igosi mpako gị ma gosipụta vidiyo na blọọgụ gị!
Mark raara onwe ya nye na-eduga ebubo a n'ezoghị ọnụ - yabụ anyị ejirila kọmitii ahụ mee ka ịde blọgụ iji nye obodo ahụ mmelite banyere otu ndị otu na-eme yana otu ha nwere ike isi nyere aka. Compendium sọftụwia agbagowo iji kwado nkwagharị ahụ ma nye akụkọ maka ịkwalite ọnọdụ nka ha ụlọ ọrụ ịde blọgụ ngwa!
Mkparịta ụka site na gburugburu web a na-achọ ma gosipụta na ibe obibi ka ị nwee ike isonye! Ọ dị mkpa na anyị ga-enye ndị obodo ụzọ iji sonye na mkparịta ụka ahụ, ma ọ dị mma ma ọ bụ na ọ dị mma. Kọmitii ahụ abụghị naanị raara onwe ya nye ịnweta Super Bowl, mana ha chọrọ ka ndị obodo tinye aka na otu esi eme ya Super Bowl kacha mma.
Iji Yahoo! Ọkpọkọ, m wuru atụmatụ dị mgbagwoju anya nke na-emepụta ma na-ehichapụ isiokwu ndị kachasị ọhụrụ site na akụkọ mpaghara anyị na ndị mmekọ mgbasa ozi mgbe ha na-ede banyere Superbowl 2012. Nke a bụ ka anyị nwee ike ịnye akụkọ akụkọ nkeji ma gosipụta nkwado mgbasa ozi mpaghara maka ịgbazite ya!
Kpọmkwem Ngwaọrụ abịawokwa nyere kọmitii ahụ aka wee nye Akaụntụ ebe anyị ga-esi na-ewepụta Mkpesa Akụkọ na Akwụkwọ Akụkọ! Anyị ga-arụ ọrụ ọzọ na ijikọta ndepụta na blọọgụ n'ime email site na iji API ExactTarget
Ihe a niile mgbe 8PM na ngwụsị izu! O zuru ezu iji mee ka ike gwụ mmadụ - mana nke a dị oke mkpa ịnweta ịgafe!
Tags: 2012 nnukwu eferenwa ehiIndiaIndianapolis nwakpakpando Indianapolispat coylesuper nnukwu efere
Feb 26, 2008 na 12:26 PM
Na-achọ mma ugbua. N'abalị ọ siri na saịtị 'isi' gaa na 'ndụ, iku ume, ebe maka ozi ọhụụ'. Nnukwu ọrụ dood.
Feb 26, 2008 na 1:51 PM